7 Izixeko eziGqwesileyo zokwenza imisebenzi yangaphandle eYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 7 Izixeko eziGqwesileyo zokwenza imisebenzi yangaphandle eYurophu
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 12/03/2021)
Iipaki zeGreen, bentaba ezintabeni, kwaye imozulu entle ikulungele ukonwaba ngaphandle. Izixeko zase-Yurobhomas zinezinto zonke ukuze uzame yonke imisebenzi yangaphandle enikelwa yiYurophu. Ukusuka ngebhayisikile eAmsterdam ukuya kwi-surf eMunich, la 7 izixeko ezilungileyo kwimisebenzi yangaphandle eYurophu zezi indawo efanelekileyo yeholide.
izithuthi kaloliwe yeyona ndlela indalo ahambe. Eli nqaku yabhalwa ukuba afunde Train Travel kwaye yenziwa yi Gcina A Isitimela, The Best Ukuqeqesha Amatikiti Website In The World.
1. Izixeko eziGqwesileyo zokwenza imisebenzi yangaphandle eYurophu: Amsterdam, Inetherlands
Xa umzi wakhiwa wajikeleza imilambo, Uza kuchitha iholide ngaphandle. IAmsterdam yaziwa njengeyona dolophu ibhayisikile inobuhlobo eYurophu. Ukukhwela ibhayisekile ayisiyondlela yothutho kuphela kodwa yindlela yobomi balapha.
Ukuhamba ngebhayisikile ngumsebenzi omkhulu ongaphandle e-Europe, yokuhamba nokubona. Olunye ukhetho kukuhlola isixeko kwisikhephe, Ngaphantsi kweebhulorho ezithandekayo kunye noyilo lweDatshi. Indlela enye, unganqakatha isiselo kwenye i-boa cafe okanye indawo yokutyela enomtsalane ngasemlanjeni iAmstel.
Umoya opholile, isibhakbhaka esiluhlaza, kunye nokutshintsha komhlaba kwenza isicwangciso esifanelekileyo sokuhlala sisebenza kunye nokumila ngelixa useholideyini.
2. Geneva, Swizalend
ISwitzerland ine uninzi lweembono ezintle eYurophu, kwaye iGeneva ijikelezwe yindalo emangalisayo. Ngaloo ndlela, abantu bendawo benza uninzi lweembono kunye nomhlaba ojikeleze bona, ukuhlala ngaphandle kwaye usebenza. Umzekelo, Lake Geneva, ekwabizwa ngokuba yiLake Leman iyintandokazi yomdlalo wamanzi.
Ukuhamba ngeenqanawa, ukuloba, ukuqubha, ukuqubha okanye ukurarha, yimisebenzi nje embalwa yangaphandle ekufuneka yenziwe eLake Geneva. Ungaqesha isikhephe okanye uthathe ixabiso elinqabileyo ukuhamba ngenqanawa.
Ukuba ungumntu weentaba, ke iindlela zaseSwitzerland Alps 'kukuhamba kufutshane nedolophu. Intaba ngesithuthuthu, bentaba, ukumisa inkampu, Ukushushuluza ebusika yimisebenzi emihle yangaphandle eyonwabisayo eGeneva.
I-Zurich ukuya eGeneva ngoLoliwe
I-Paris ukuya eGeneva ngoLoliwe
UBern uye eGeneva ngoLoliwe
3. Izixeko eziGqwesileyo zokwenza imisebenzi yangaphandle eYurophu: eMunich, Jemani
EMunich likhaya lelona likhulu iipaki zasezidolophini emhlabeni, Igadi yesiNgesi. Indawo enomhlaba kunye nohlaza ilungele imisebenzi yangaphandle, Ukubeka iMunich phezulu kwe 7 izixeko ezibalaseleyo kwimisebenzi yangaphandle eYurophu.
Kwigadi yesiNgesi, ungahlala usebenza, ngokuya ngokubaleka okanye ukubanda, kwi nepikniki ngasemanzini, ukuhlamba ilanga, kunye nokuqubha. Enye indawo enkulu yemisebenzi yangaphandle eMunich yintlambo eyenziwe ngumntu nge-Eisbach, kwigadi yesiNgesi. Yeyona ndawo iyithandayo yabasasazi ekubambeni amaza nokwenza intshukumo yabo.
Dusseldorf ukuya eMunich ngoLoliwe
Dresden ukuya eMunich ngoLoliwe
Nuremberg ukuya eMunich ngoLoliwe
4. Vienna, Ostriya
Ukuhlala esixekweni okanye ukuya emaphandleni, IVienna sisixeko esoyikekayo semisebenzi yangaphandle eYurophu. Ukuhamba ngenqanawa eDanube, okanye ukuphuma ngaphandle kweziko elixakekileyo ukuya eLainzer Tiergarten Ugcino lwendalo, IVienna inemisebenzi emininzi yangaphandle enokuyinika naluphi na uhlobo lokuhamba.
Ukuba uthatha isigqibo sokuhlala embindini, Enye yeendlela ezilungileyo zokubona indawo kukuhamba kukaSegway okanye ukuhamba ngenqanawa kumlambo iDanube. kodwa, ukuba ukhetha ukuhlola iVienna njengendawo, yaye ukufumanisa ubuncwane bayo obufihliweyo, ke indawo yogcino yendalo igqibelele.
25 sq km yehlathi kunye izilwanyana zasendle Ndikulindile kwipaki enkulu yedolophu eVienna. Hamba ekujikelezeni, jog, okanye ube nepikniki kule oasis eluhlaza, iya kwenza eyakho IsiVietnam iholide igqityiwe.
5. Izixeko eziGqwesileyo zokwenza imisebenzi yangaphandle eYurophu: Zurich, Swizalend
Xa iinduli kunye neendawo zomhlaba zeentaba zeAlpine zijikelezile, kwaye kukho ichibi elimangalisayo ngaphambili, Uza kuba yenye yezona dolophu zihle kakhulu kwimisebenzi yangaphandle eYurophu. IZurich sisixeko esimnandi nesidlamkileyo, apho unokuhamba khona thatha uloliwe we-SZU uye kwinqaba yokujonga. Inqaba ebonakalayo ikwiUetilberg, intaba entle yesixeko enembono ezintle zommandla ojikelezileyo.
Ukuba ufuna ndiyakuthanda nokunyuka, emva koko unokunyuka uye kwiziko ngeendlela ezahlukeneyo zokuhamba uhambo olude ukusuka e-Uetilberg. Omnye umsebenzi omkhulu ongaphandle eZurich kukuzonwabisa kwiibhanki efanelekileyo yomlambo, kumdlalo wevolley yolwandle okanye uphumle nje, kwiFlussbad Oberer Letten, Indawo yengingqi.
Ukuba ukhetha ukukwenza njengomkhenkethi eZurich, emva koko ungene esikhepheni uhambo ngeenyawo ujikeleze iLimmatschifffahrt eya kukusa phantsi kwesixeko 7 imizila.
ILugano ukuya eZurich ngoLoliwe
6. Intle, Fransi
Ukubaleka okanye ukunandipha ukuqubha kusasa elwandle, yenye yezona zinto zixabisayo. Naxa useholideyini, ukuhlala esebenzayo kunye nemilo ibhalansi nge ukungcamla ukutya kwasekuhlaleni kwaye uzithobele. Ngaphezulu kwayo yonke le nto, Isimo esisebenza ngengqondo siziva simnandi xa iFrench Riviera ikubethela fus ngamandla kunye nevithamini c.
Kuhle sisixeko esimangalisayo yemisebenzi yangaphandle eYurophu. Ukukhwela amahashe elunxwemeni, ukuqubha, ejonge iilhells, kwaye ukuba nepikniki xa litshona ilanga yonke yimisebenzi emihle yangaphandle yokunandipha eyona Riviera yaseFransi.
7. Izixeko eziGqwesileyo zokwenza imisebenzi yangaphandle eYurophu: Florence, ElamaTaliyane
IFlorence sesinye sezona zixeko zihle e-Itali. Ungasifumana isixeko njenge bonke abakhenkethi, okanye ngendlela ekhethekileyo kunye engalibalekiyo. Ukuhamba okanye ukuhamba ngebhayisikile kwindawo ephawulweyo kunye neemboniselo zimbini izinto ezintle ezenziwa ngaphandle eFlorence.
kunjalo, ukuba ufuna ukuzama imisebenzi emibini engaqhelekanga, kunye neyona misebenzi intle yangaphandle eYurophu, emva koko zama ukubhabha komoya oshushu kunye nokuhamba esibhakabhakeni. Uyilo lweFlorence kunye neepaki ziyamangalisa kwaye umbono ovela ngasentla uya kuwususa ngqo umphefumlo wakho.
Ukuba ufuna ukubetha izihlwele zabakhenkethi kunye nokuzama imisebenzi yangaphandle engaphandle, ke iFlorence sisixeko esimangalisayo semisebenzi yangaphandle eYurophu.
IGenoa ukuya eFlorence ngololiwe
Parma kuFlorence ngololiwe
Imisebenzi yangaphandle eYurophu
IYurophu igcwele iziganga. Nokuba uthini na manani amaxesha oye waya eYurophu, kuhlala kukho i-adventure entsha. Wethu 7 izixeko ezilungileyo kwimisebenzi yangaphandle eYurophu zilungele abakhenkethi kunye nabahambi abafuna umdla. Ukwengeza, kwabo bafuna ukujonga nje ubuhle bangaphandle kunye neembonakalo zomhlaba.
Apha Gcina A Isitimela, Siya kukuvuyela ukukunceda ufumane amatikiti etreyini angabizi kakhulu kuyo nayiphi na le misebenzi yangaphandle.
Ngaba ufuna ukufaka iposti yethu yebhlog "Izixeko ezi-7 eziGqwesileyo zokwenza imisebenzi yangaphandle eYurophu" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcities-outdoor-activities-europe%2F%3Flang%3Dxh ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
imisebenzi frenchriviera outdoor OutdoorActivities Tranride train Travel traintravelgermany travelitaly indawo yokuhamba UkuhambaVienna